Warshadda gawaarida qaada 47meteriga Shiinaha iyo iibiyaasha | Changyuan
1. Gawaarida Xamuulka ee Xamuulka qaada Gawaarida Naafada ah 47m Farsamada is-baarista
La soco marxaladda qalabka waqti kasta, oo la soco oo ogaada in ka badan 200 khaladaad waqtiga dhabta ah, gaabin waqtiga mushkiladaha 70%, oo badbaadi waqtiga iyo dhibkaba.
2. Gawaarida xamuulka qaada ee dusha sare leh 47m Smart boom system
Sirdoonka ku-saleysan dadka iyo tikniyoolajiyada casriga ah ayaa ka dhigaya hawlgalka bam-gacmeedka xamuulka qaada gawaarida xamuulka ah mid aad u badan oo macquul ah kuna habboon.
Hal-badhanka kororka iyo dib u gurasho
Hal-badhan gacan fidsan oo fidsan ayaa riixaysa kor ama hoos udhaca gacanta otomatiga ah si loo dheereysto ama dib loogulaabsado koritaanka si otomaatig ah.
Yaree dhererka hawlgalka
Haddii ay dhacdo dhisme gudaha ah ama dibedda ah oo leh carqalad sare, hawshani waxay si wax ku ool ah uga horjoogsan kartaa inay koomadu taabato dusha sare iyo waxyeelada soo gaadhay.
Meel ku ogow sida ay wax u socdaan
Si fudud u hel meesha koowaad iyo kan labaad ee booska, oo si weyn u fududee hawlgallada koritaanka.
3. Tiknikada xirmooyinka culus ee gawaarida xamuulka qaada ee 47m
Mashiinka Xamuulka ee Xamuulka qaada ee Xamuulka qaada ayaa si sax ah u dhisa falsafada waxsoosaarka saxda ah iyo adag ee adag iyo heerka nabadgelyada ee aan xadidanayn.
4. Kordhinta tikniyoolajiyada ilaalinta heerkulka
Qalabka korantada amniga waxaa intaa dheer oo lagu rakibay tuubada dheelitirka muraayadda santuuqa. Haddii ay dhacdo culeys xad dhaaf ah, culeyska saliidda xad dhaafka ah ayaa si otomaatig ah loo siidaayaa, si looga hortago in kororku waxyeelo u geysto.
Tikniyoolajiyadaha isku xidhka xannibaadda Hopper
Marka shaashadda furniinka la furo, aaladda wax ka shaqeysa ee ku jirta guntin ayaa si toos ah u joogsan doonta, si loo hubiyo nabadgelyada hawlgalka.
Heerka saliida dareeraha baarista otomaatiga iyo tikniyoolajiyadda difaaca
Lasoco kaydka saliidaha hayd-haynta waqtiga dhabta ah. Haddii ay dhacdo mugga aan ku filnayn, qaylo-dhaanta ayaa si otomaatig ah loo diri doonaa ama bamgareyn ayaa la joojin doonaa, si looga hortago in nidaamka hydraulic waxyeelo soo gaarto.
Ku adkaysiga mabaadi'da asaasiga ah ee '' Wada-jirnimada, Xirfad-xirfadeedka, Wax-ku-oolnimada iyo Guusha-Win ', Mashiinnada shirkaddayadu waxay rajeynayaan inay iskaashi kula yeeshaan isla markaana mustaqbalka wada horumariyaan.
Moodel ： NJ5281THB47 Halbeega Farsamada Moodel ： NJ5281THB47 Halbeega Farsamada
Cabbirrada Mashiinnada dhererka buuxa 11700mm Soo saarista nidaamka cabirka Barakaca la taaban karo ee la taaban karo Cadaadis hooseeya 163m3/ h
Dhererka guud 3950mm cadaadis sareeya 97m3/ h
Dhererka guud 2500mm Cadaadiska bamgareynta fekerka Cadaadis hooseeya 8MPa
Miisaanka qofka 33000Kg cadaadis sareeya 12 MPa
Moodhiska 'Chassis' Shandeka Wakhtiyada bamgareynta fekerka Cadaadis hooseeya 32
Qaabka wadista 6 × 4 cadaadis sareeya 19
nooca mashiinka Nin Jarmal ah Foomka waalka qaybinta S Qiimaha
Awoodda soosaarka / xawaaraha 294Kw / 2100RPM Gudbinta dhululubo dhexroor ah / garaac 260 / 1600mm
Heerarka Emission Wadan V Barokaca matoorka saliida 260ml / r
Cabbirka taayirrada 11.00R20 Muuqaalka Hopper 0.6m3
Wheelbase 4650 + 1400mm Dhererka quudinta 1450mm
Dhumuc toosan 47m Dhexroor gudaha ah ee tuubbooyinka gudbinta 125mm
Dhererka toosan siman 42m Isku darka guud ee ugu badan 40mm
Qoto dheer oo toosan 29.4m Isku-darka sibidhka 160-220mm
Foom isku laabma 5RZ Nidaamka cadaadiska saliida 31.5MPa
Gacanta koowaad dherer 9500mm Mugga haanta saliida 700L
Geeska 89o Nooca nidaamka hydraulic Furan
Gacanta labaad dherer 7700mm Wareega korantada sare iyo mid hooseeya Beddelka otomaatigga
Gacanta saddexaad dherer 7550mm Habka nadiifinta biibiile Dhaq
Gacanta afaraad dherer 8900mm Summadaha Qalabka wareejinta kiiska Jarmalka Spor / Zhejiang
Geeska 243o Bamka saliida weyn Jarmalka Rexroth
Gacanta shanaad dherer 9000mm Bamka bullaacadda Jarmalka Rexroth
Geeska 214o Bamka cadaadiska joogtada ah Jarmalka Rexroth
Jooji gudbinta tuubada jilicsan dherer 3m Bamka matoorka Jarmalka Rexroth
Xaggo wareejin kara ± 360 o Fallaadhiisu badanyihiin Harvey, Jarmalka
Ballaca hore ee hore 8500mm Miisaan dheelitirka korantada Rexroth Jarmal / HBS
Dib u ballac ballaadhka ballaadhka 9400mm Manifold Eaton ， USA
Masaafada dhererka dheer ee lugaha hore iyo dambe 9000mm Sheet bir ah Waxaa laga keenay Sweden / Baosteel
Qaabka furfuridda Lugta hore Nooca X gacanta fog HBC / ohm, iwm.
Lugta dambe Lugaha wareega Qalabka korantada Schneider / Omron
Hore: Gawaarida qaada 42 mitir
Xiga: 50 mitir bambo gacmeed